Degso Barnaamijyada loogu talagalay Windows
Firefox waa biraawsar internet furan oo furan oo ay soosaartay Mozilla si loogu oggolaado isticmaaleyaasha internetku inay si xor ah oo dhakhso leh u baaraan shabakadda. Mozilla Firefox, oo loo soo bandhigo isticmaaleyaasha gebi ahaanba bilaashka ah, oo ay la socoto cusbooneysiintii ugu dambeysay; Waxay noqotay mid iska caabinaysa...
UC Browser, oo ka mid ah daalacashada ugu caansan ee aaladaha mobilada, wuxuu horey u gaadhay kumbuyuutaro ahaan codsi Windows 8 ah, laakiin markan, kooxdii soo saartay codsi dhab ah oo desktop ah waxay siisaa biraawsar si habsami leh ugu shaqeyn doona Windows 7 dadka isticmaala PC Browser-ka, kaas oo ku adkaysanaya bixinta khibrad u...
Opera waa biraawsar internet beddel kale ah oo ujeedkiisu yahay in lagu siiyo dadka isticmaala khibradda internet-ka ugu dhaqsaha badan uguna horumarsan iyada oo la cusbooneysiiyay mashiinkeeda, istcimaalka isticmaalaha iyo astaamaha. Soo Degso Opera Ku xoojinta kaabayaasheeda Chromium iyo Blink si ay u ilaaliso booskeeda ka mid ah...
Codsiga CrystalDiskMark, waxaad ku cabbiri kartaa xawaaraha akhriska iyo qoraalka ee HDD ama SSD kombiyuutarkaaga. CrystalDiskMark, oo ah codsi lagu cabirayo waxqabadka diskka, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku cabirto xawaaraha HDD iyo SSD qaab aad u yar oo fudud. Waxa kale oo aad samayn kartaa imtixaannada akhriska iyo qorista si aan...
McAfee Rootkit Remover waa codsi guulaystay oo ka caawiya dadka isticmaala inay ogaadaan oo tirtirmaan xididdada xididka ah, kuwaas oo ah software xaasidnimo ah oo aan lagu ogaan karin hababka caadiga ah ee kombiyuutarkaaga. Rootkits waa khayaano aad khatar u ah maxaa yeelay way is qarin karaan. Intaa waxaa dheer, rootkits -ka, oo qarin...
Iyada oo ay ku xirantahay qaab fudud oo casri ah, Safari ayaa kaa jiidaya jidkaaga inta lagu guda jiro daalacashada internetka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad yeelato khibrada ugu xiisaha badan internetka inta aad dareemeysid amaan. Barnaamijkan, oo ay Apple aad ugu hanweyn tahay xawaaraha iyo amniga, ayaa lagu sii wadaa in loo horumariyo...
Waxaa daabacay soo -saaraha ciyaarta madaxbannaan Rovio, Angry Birds waa ciyaar aad u xiiso badan oo fudud. Noocyada mobilada ee ciyaarta ayaa madadaalo sare u siiya malaayiin isticmaale oo adduunka ah, iyo nooca kombiyuutarka ee ciyaarta ayaa noo oggolaaneysa inaan la kulanno madadaalo isku mid ah. Shimbiraha xanaaqsan, dhammaantood...
Waa maxay Tor Browser? Tor Browser waa biraawsar internet lagu kalsoonaan karo oo loo sameeyay isticmaaleyaasha kombiyuutarka ee daryeela amnigooda iyo asturnaanta qadka, si ay si qarsoodi ah ugu baaraan internetka ugana dhex socdaan iyagoo ka saaraya dhammaan caqabadaha ka jira dunida internetka. Software-ka, oo u shaqeeya sidii...
Ilaali My Disk waa softiweer amni oo lacag laaan ah oo kuu oggolaanaya inaad ka ilaaliso ulahaaga USB -ga iyo kombiyuutarrada fayraska Autorun, oo waayadan aad caan u ahaa. Xitaa haddii aad ilaaliso kombiyuutarkaaga adiga oo kaashanaya barnaamijka antivirus, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhibaatooyin markaad ku xirato xusuusta USB...
Bitdefender Antivirus Free waa barnaamij ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan ee aad ku isticmaali karto bilaash kombiyuutaradaada. Lahaanshaha interface aad u fudud oo cad, barnaamijka antivirus wuxuu si otomaatig ah kuugu qabanayaa ku dhawaad ​​dhammaan noocyada kala duwan ee ilaalinta wuxuuna kaa tirtirayaa jahwareer kasta. Bitdefender,...
Norton AntiVirus waa barnaamij xallin amni oo xirfad leh oo bixiya difaac horumarsan oo ka dhan ah fayrasyada, spyware, marka la soo koobo, dhammaan barnaamijyada iyo faylasha waxyeeli kara kombuyuutarkaaga. Haddii aad rabto inaad si buuxda u ilaaliso kumbuyuutarkaaga oo aad u ilaaliso software-ka xun ee halista amniga u horseedaya...
Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free) waa antibiyootiko bilaash ah oo dhaqso badan oo adeegsadayaasha Windows PC ay ku soo dejistaan. Kaspersky Free Antivirus 2020 ayaa ah tan loogu kalsoonida badanyahay barnaamijyada antivirus bilaashka ah. Soodejiso Kaspersky Free Antivirus Kaspersky Security Cloud Free waa mid ka mid ah...
Waxaan u ciyaarnay ciyaaro badan hal-abuurka halyeeyga ah Eebaha siddooyinkii, iyo cayaartii ugu xiisaha badneyd ee soo-saarkan sumadda leh shaki laaan waa taxanaha istiraatiijiyadda guuleysatay ee taxanaha Dhulka Dhexe. Marka laga reebo ifafaalahan, waxaan la kulannay ciyaaro badan oo kala duwan oo loogu talagalay astaanta, kuwa aan la...
Soo dejiso Tencent Gaming Buddy oo ku raaxeyso ku ciyaarida PUBG Mobile, Brawl Stars iyo ciyaaraha kale ee caanka ah ee Android kombuyuutarka. Si loo ciyaaro Isku dhaca Qabiilooyinka, Wicitaanka Waajibaadka Mobile, Garena Fire Free, Subway Surfers, Apex Legends, GTA (Grand Theft Auto), League of Legends, My Talking Tom iyo ciyaaro badan...
Avira Free Antivirus waa antibiyootiko awood badan oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka isticmaala ee doonaya inay ka difaacaan kombuyuutarkooda fayrasyada, trojans, tuugada aqoonsiga, gooryaanka, malware iyo waxyaabo kaloo badan. U fidinta isticmaaleyaasha is-dhexgal si habeysan loo abaabuley iyo xog-warraysi antivirus si joogto ah...
Avast Free Antivirus, oo bixisa nidaamka difaaca fayraska bilaashka ah ee kombiyuutarada aan ku isticmaalnay guryaheena iyo goobaha shaqada sanado badan, ayaa la soosaarayaa oo laga cusbooneysiinayaa hanjabaadaha dalwaddii. Kumbiyuutar kasta oo isticmaala internetka, wuxuu ku jiraa shabakad xitaa haddii uusan ku xirneyn internetka, kuma...
AVG AntiVirus Free waxaa halkaan ku yaal nooc cusub oo qaadaya boos yar isla markaana yareynaya isticmaalka xusuusta marka loo barbar dhigo noocii hore. Isku darista sheegashada ee dhakhsaha iskaanka oo leh waxqabad wanaagsan, softiweerku wuxuu la yimaadaa isbeddelo muhiim ah oo ku saabsan qaabeynta isdhexgalka oo leh nooca 2020. ...
Haddii aad la yaaban tahay waxa ku jira kombiyuutarkaaga, waa kan Speccy, barnaamij bandhig macluumaad nidaam lacag laaan ah halkaas oo aad si fudud uga heli karto macluumaadka qaybaha. Qalabkan, waxaad si dhakhso leh u ogaan kartaa sumadda processor -ka (CPU) iyo macluumaadka moodalka ee nidaamkaaga (Intel ama AMD, Celeron ama Pentium),...
Deriska Qarsoodiga ah waa nooc ka mid ah ciyaartoy badan oo loo yaqaan Hello Neighbor, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagala soo baxo oo lagu ciyaaro ciyaaro naxdin leh oo ku saabsan kombuyuutarka iyo moobiilka. Soo Degso Deris Qarsoodi ah Deriska Qarsoodiga ah waa ciyaar argagax badan oo bulsheed lagu ciyaaro halkaas oo koox ku...
Iyada oo leh Winamp, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu doorbida badan uguna isticmaalka badan warbaahinta adduunka, waxaad ku ciyaari kartaa dhammaan noocyada faylasha maqalka iyo fiidiyaha ah dhibaato laaan. Inta lagu jiro rakibidda Winamp, waxaad haysataa fursad aad ku habayn karto goobo badan oo la xiriira barnaamijka sida rabitaankaagu...
Xakamaynta Firewall -ka ee Windows waa codsi yar oo fidiya shaqaynta Windows Firewall -ka wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad si fudud u gasho xulashooyinka inta badan la isticmaalo ee Windows Firewall. Barnaamijku wuxuu ku shaqeeyaa saxanka nidaamka wuxuuna ka horjoogsadaa adeegsadayaasha inay waqti lumiyaan iyagoo si fudud u galaya goobaha...
Haddii aad raadineyso app si aad u dillaacdo lambarka Aqoonsiga Apple ama aad u dillaacdo Password iPhone Lock, iMyFone LockWiper ayaa loo sameeyaa si sax ah. Si aad u iibsato, booqo cinwaankan. Inaad iska ilowdo lambarkaaga sirta ah ee iPhone-ka ama Apple ID waa mid ka mid ah xaaladaha ugu caansan. Sidaad ogtahay, way adkaan kartaa in...
Beddelaha YouTube Downloader waa aalad bilaash ah oo aad u adeegsan karto inaad kala soo baxdo fiidyowyada YouTube-ka iyo bogagga kale oo aad ugu beddesho qaabab kala duwan oo maqal iyo muuqaal ah. Waxaa la iman dhisay-in media player inuu u ciyaaro aad videos soo bixi. Beddelaha YouTube Video Downloader Beddelaha YouTube Downloader waa...
Soo dejiso KMSpico, bilaash Windows activation, barnaamijka hawlgelinta Office. Maxay Tahay Inaad Soo Degsato KMSpico? Waxay bixisaa hawl aan xadidnayn, aan xadidnayn, firfircoonaanta nolosha ee nidaamka hawlgalka Windows iyo barnaamijka Xafiiska. Waxaan dhihi karaa habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee loo hawlgaliyo loona...
Daryeelka Wadaha Wise waa barnaamij casriyeyn darawalnimo oo lacag laaan ah oo loo heli karo noocyada Windows. Daryeelka Wadaha Wise waa barnaamij taageera database -ka in ka badan 600,000 oo darawalo iyo aalado, si deg deg ah u baadhaa cusboonaysiinta oo bixiya adeeg cusboonaysiin otomaatig ah. Daryeelka Darawalka Wise wuxuu siiyaa...
Filmora Video Editor waa barnaamij ficil muuqaal ah oo fiidiyow ah oo ka caawiya dadka isticmaala inay yareeyaan fiidiyowyada, isku daraan fiidiyowyada, ku dar saamaynta fiidiyowga. Waxaad ku abuuri kartaa fiidiyowyadaada riyada Filmora Video Editor, softiweer kale oo aad isticmaali karto halkii aad kaheli laheyd Windows Movie Kan...
Browser CCleaner waa biraawsar shabakad leh astaamo amni iyo asturnaan si loo ilaaliyo amniga internetka. Waxay la timid dhammaan qalabka aad u baahan tahay si aad u maamusho asturnaantaada internetka, aqoonsiga iyo macluumaadkaaga shaqsiyeed. Waad soo dejisan kartaa iskuna dayi kartaa Browserka CCleaner, oo ah degsi deg deg ah, astaan...
Microsoft Visual C ++ Xidhmada Dib-u-Qaybinta ee Visual Studio 2015, 2017, iyo 2019 waa xirmo aad u isticmaali karto inaad ku socodsiiso barnaamijyo, codsiyo, iyo adeegyo sida ciyaaro lagu qoro adoo adeegsanaya luuqadda barnaamijka. Xirmada waxaa ku jira maktabadaha ay adeegyadu u baahan yihiin. Magaca Ingiriisiga ee xirmada, oo leh 2...
Soo Degso PUBG PUBG waa ciyaar royale dagaal ah oo aad ka soo dejisan karto kana ciyaari karto kombiyuutarka Windows iyo moobaylka. Gudaha PUBG, oo kordhiya tirada ciyaartoyga mobilada iyo kombuyuutarka labadaba oo wata cusbooneysiin joogto ah, qof walba wuxuu leeyahay hal ujeedo: inuu badbaado! Ciyaarta, oo loo heli karo sida PUBG PC...
IObit Darawalka Booster 8 waa barnaamij bilaash ah oo u oggolaanaya helitaanka darawallada, cusbooneysiinta darawallada iyo rakibidda darawallada bilaa internetka. Waa qalab bilaash ah oo loo diyaariyey inaan ka takhalusno dhibaatooyinka cusbooneysiinta darawalnimada ee aan inta badan kula kulanno kumbuyuutarradeena Windows, waxaana...
Happy Wheels, oo sidoo kale loo yaqaan Happy Wheels oo af Turki ah, waa nooca kumbuyuutarka ee ciyaarta xirfadda fiisikiska ku saleysan ee qalabka moobiilka. Ka dib markaad ka soo degsato boggan Wheels Happy boggan, waxaad isla markiiba u ciyaari kartaa adigoon rakibin. Waxaan ku safreynaa gawaarida giraangiraha ee Wheels Happy, ciyaar...
Codsi lagu ogaanayo barnaamijyada nooca Keylogger ee kugu sababa inaad keydiso xogta lagu geliyey furaha oo aad la wadaagto dadka kale. Barnaamijyada nooca keylogger-ka, furayaasha sirta bangigaaga, emaylka iyo furaha sirta ah ee la midka ah waa la xadi karaa. Suurtagalnimadani xitaa way ka sarraysaa kafateeriyada internetka ee u furan...
Istuudiyaha Camtasia Studio waa mid ka mid ah shaashadaha ugu wanaagsan ee fiidiyaha lagu duubo iyo barnaamijyada fiidiyowga fiidiyowga ah. Waxaad kala soo bixi kartaa nooca ugu dambeeya ee Camtasia Studio 2021 Softmedal, oo ah barnaamij shaashad shaashad guul leh oo ka caawiya dadka isticmaala inay duubaan fiidiyowyada shaashadda sidoo...
Xulashada Midabka Shaashadda waa barnaamij qabasho koodh midab midab leh oo aad waxtar u leh oo aad si fudud ugu qabsan karto RGB, HSB iyo HEX -yada midabka midab kasta oo aad jeceshahay desktop -kaaga. Ka dib markaad socodsiiso barnaamijka, oo ah mid aad u fudud in la isticmaalo, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa...
Maareeyaha Kubadda Cagta 2021 waa xilli -ciyaareedka cusub ee Maareeyaha Kubadda Cagta, ciyaarta maamulaha kubbadda cagta ee inta badan la soo dejisto oo lagu ciyaaro PC. Maareeyaha Kubadda Cagta 2021 ayaa diyaar u ah inuu horay u dalbado Steam iyo Dukaanka Ciyaaraha Epic, wuxuuna diyaar u ahaan doonaa iibsashada bisha Nofembar. Haddii...
EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition Free Edition waa barnaamij soo kabashada faylka oo ka caawiya dadka isticmaala inay soo kabsadaan faylasha la tirtiray. Markaan isticmaaleyno kombiyuutarkeena, mararka qaarkood waxaan si kama ah u tirtirnaa faylashayada. Caadiyan, markaan tirtirno faylasha loo diray qashinka dib -u -warshadaynta...
Microsoft Visual C ++ 2005 waa xirmo isku keenaya maktabadaha Visual C ++ ee ay u baahan yihiin barnaamijyada, barnaamijyada, ciyaaraha iyo adeegyada la midka ah ee lagu soo saaray Microsoft barnaamijkeeda Microsoft Visual C ++. Waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo baakadka ah, kan Ingiriisiga ah kaas oo ah Microsoft Visual C ++ 2005...
CCleaner waa nidaam ku guuleystey nidaamka hagaajinta iyo amniga oo sameyn kara nadiifinta kombuyuutarka, dardargelinta kumbuyuutarka, ka saarista barnaamijka, tirtirka feylka, nadiifinta diiwaanka, tirtirka joogtada ah iyo kuwa kaloo badan. Dadka isticmaala Windows PC waxaa la siiyaa laba nooc, CCleaner Free (Bilaash) iyo CCleaner...
WhatsApp waa barnaamij si fudud loo rakibo oo fariin lacag laaan ah oo aad u isticmaali karto labada mobiil iyo Windows PC - computer (sida web browser iyo desktop app). Waad ku soo dejisan kartaa kuna isticmaali kartaa WhatsApp taleefankaaga ama waxaad ugu isticmaali kartaa sidii barnaamij desktop ah kombuyutarkaaga Windows PC ama Mac....
Markaad soo degsato Advanced SystemCare, waxaad yeelan doontaa barnaamij ku habboon nidaamka oo ka mid ah barnaamijyada ugu guulaha badan xagga dayactirka kumbuyuutarka iyo dardargelinta kumbuyuutarka. Sidee loo rakibaa Nidaamka Daryeelka Sare? Advanced SystemCare, oo ah softiweer aad kala soo bixi karto oo aad bilaabi karto inaad si...
Maareeyaha Hawsha Amniga waa maareeye amni oo loogu talagalay inuu ku siiyo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan hababka (codsiyada, DLLs, BHOs, iyo adeegyada) ka socda kombiyuutarkaaga. Hawl kasta, waxay kor u qaadeysaa Maareeyaha Hawsha Windows waxayna ku siinaysaa qiimeynta halista amniga, sharraxaadda habka, waddada faylka,...
In kasta oo Jihosoft 4K Video Downloader ay u taagan tahay sidii YouTube video downloader, haddana waxay taageertaa soo degsashada fiidiyowyada Facebook, Instagram iyo goobo badan. Degdeg ah, fududaan ah, fiidiyow fidiye wax ku ool ah oo aad u isticmaali karto inaad kala soo baxdo 720P, 1080P, 4K iyo xitaa fiidiyowyo xallinta 8K...